Wiil waal - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Wiilwaal)
Wiil waal waa sheeko dhaqameed ku saabsan boqor soomaaliyeed oo noolaa qarnigii 16aad oo la odhan jiray Wiil Waal. Boqrka ayaa ahaa nin xukun adag xikmadse badan. Wuxuu ahaa hoggaamiye cimrigiisa badankiisii ku idlaystay duulaan iyo difaac joogta ah oo tolkii kula jiray Galla degaankaa muddo gaaban ka hor ka talinaysay.
Nin dadka aad u imtixaana oo isku daya inuu qof walba garashadiisa dhudhumiyo ayuu ahaaye, maalin maalmaha ka mid ah ayuu shir weyn wacay oo uu isagu yeedhay odayaashii beesh. Wuxuu codsaday in nin walba oo soo gaadhi kara shirka yimaado. Il-laawe iyo lug-laawe kol ay ku tahay, Bartire wixii akabaabiga ka dhawaa ayaa isu yimid. Af-niijiye (qof dadka warka gaadhsiiya siddii makarafoonkii) ayuu idmay oo intuu shirkii ka dhex kacay faray in nin walba gurigiisii ku noqdo, shirka barrito la isugu imanayana uu keeno “cadka rag walaaleeya.” Raggii shirka yimid oo yaaban oo war tolow maantana muxuu arintan cusub uga jeedaa is leh ayaa dib u geddoomay.
Waxaa raggaas la xujeeyey ka mid ahaa nin caydh ah oo aan bar adduun ka nixin tobaneeyo neef oo adhi ah mooyee, caruur rajooyin ahna korsada. Aabe mutaxan ama ‘single father’ ayaa dhici karta in dadka qaarkii u yaqaano ninka noocaa ah. Caruurtaa waxaa ugu weynaa gabadh 16 jir ah oo la wariyey inay qurux iyo qiimaba bogcad cidla ah u taagnayd. Gurigiisii ayuu tagay odaygii wuxuuna gabadhiisii faray inay gawracdo sabeenta neefafkooda ka dhaqaaqaysa. Ee aabo, miyaad waalatay caydh ayeynu nahay ee miyuu inaga baxaa neef aan gawracno maanta, maxaadse sabeenta adhigaba laga qaato ku maagtay, ayey weydiisay. Aabo miyaan khayaar leeyahay saw Wiil Waal raggii ma amrin inay sidaa yeelaan, waynu ku qasbanahay ee aabo sarakac oo durduri, ayuu ugu jawaabay. Way u muuqatay danyaraanta gabadhu ka calaacashay laakiinse wuxuu laabta ku hayey cidhib xumada ka dhalan karta amarka Garaadka oo uu ka madax-adaygo ileen “Askar amar ka diidaa kornayl, waa Allow sahale.”
Adiguba haddii aad xilligaa joogi lahayd, fursad aad kula xidido Garaad Wiil Waalna heli lahayd miyaad ka labalabayn lahayd? Waa maya jawaabtu ayey ila tahay. Halkaa ayaa gabadhii xujadda furtay loogu dhisay Wiil Waal ciddiina ku qaraabowday. Walaalayntii ragga wuxuu hungurigu ku darsaday inuu ragga xidid ka dhigo maxaa yeelay hungurigii geedka la keenay ayaa sababay in gabadhada Garaadka loo dhiso.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Wiil_waal&oldid=200955"
Last edited on 14 May 2020, at 22:02
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 14 May 2020, marka ee eheed 22:02.